Abiy Axmed: “Waxaan ku qasbannahay inaan qaadno tallaabbo amniga dalka aan ku sugeyno” - Latest News Updates
Abiy Axmed: “Waxaan ku qasbannahay inaan qaadno tallaabbo amniga dalka aan ku sugeyno”
Ra’isal wasaare Dr Abiy Axmed oo xaaladda dalka Itoobiya uu ku sugan yahay warbaahinta dalka Itoobiya shacabka farriin uga tabiyey wuxuu sheegay shacabka waxyaabaha ay xuquuqdooda ku meelmarsadaan iney ka mid tahay doorashada guud oo dalka ka qabsoonto taasoo ah xuquuq dimuqraadiyadeed oo ay muwaaddiniintu leeyihiin.
“Iyada oo ay xisbiyada mucaaradka qaar ay aaminsanaayeen iney doorasho dhicin ayaan annagu ku adkeysannay doorashada iney xilligeeda ku dhacdo diyaar garow ballaaranna la billaabay.”
“Hase yeeshee, cudurka safmarka ee Covid-19 ee dalka Itoobiya soo gaaray ayaa nagu kalliftay inaan doorashada dib u dhigno.”
“Si ka baxsan dastuurka dalka Itoobiya u yaallo dhaqdhaqaaq kasta oo ka hormarinayo ay tahay khalad aad u weyn ayna xadgudub ku tahay shruucda dalka iyo kan caalamka intaba.”
“Cid kasta oo doorasha aan sharciga waafaqsaneen iney qabato dooneyso, isla-markaana damacsan iney awoodda deegaan xoog ku qabsato dowladda federaalka wixii hadda ka dambeeyo uma dul qaadaneyso, tallaabba kasta inaan qaadanana diyaar ayaan u nahay” ayuu yiri Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed.
Hadallada kulul ee Dr Abiy maxaa keenay?
Xisbiga deegaanka Tigreega ka arrimiya ee TPLF ayaa maalin ka hor ku dhawaaqay iney deegaan ahaan ay qabsanayaan doorasha iyaga u gaar ah oo dalka Itoobiya intiisa kale aan la socon.
Guddiga fulinta xisbiga TPLF oo shir seddex maalmood uga socday magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega soo gabagabeeyey ayaa soo saaray amar ay maamulka deegaanku ku amrayaan in laguda galo diyaargarowga iyo qabanqaabada uu deegaanku doorashadiisu ku qabsan lahaa.
Hadalka ka soo yeeray deegaanka Tigreega ayaa noqday mid aan horay looga baran dalka Itoobiya tani iyo marki uu ka hirgelay nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku saleysan.
Go’aanka Xisbiga TPLF ee doorashada ku aaddanna waxaa ku dhawaaqay Guddoomiyaha Xisbiga TPLF ahna madaxweynaha deegaanka Tigreega Dr Gebresiyon Gebre-Mikaael.
Guddiga doorashooyinka siduu uga falceliyey?
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya Birtukaan Mideqsa oo warbaahinta dalkaasi la hadashay ayaa sheegtay hadalka ka soo yeeray deegaanka Tigreega inuu la yaab ku noqday uuna yahay mid sharci darra ah.
“Sida uu dhigayo dastuurka dalka Itoobiya qodobkiisa 102-aad arrimaha doorashada waxaa awood u leh guddiga doorashooyinka qaranka” ayey tiri.
“Doorashada heerarkeeda kala duwan waxaa qabanaya oo wakhtiga la qabanayana go’aan ka gaari karo oo keli guddiga doorashooyinka qarnaka ee dalka Itoobiya.”
“Deegaan wuxuu doorasha si gaar ah uu u qabsan karaan marka uu codsigiisa uu soo gaarsiiyo guddiga doorashooyinka, guddiguna uu oggolaado codsiga deegaanka oo keli ah balse, ay jirin ilaa iyo hadda deegaan codsi doorasha inuu qabsado soo gaarsiisay guddiga doorashooyinka, xilli dalka Itoobiya uu ku jiro xaalad degdeg ah oo uu la tacaalayo cudurka safmarka ee Covid-19 iney deegaan xubin ka ah dowladda Federaalka ay yirahdaan doorashaan qabsaneynaa waa nasiib darro” ayey tiri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya Birtukaan Mideqsa.
Tani iyo marka uu isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya uu dalka Itoobiya majaraha u qabtay Dr Abiy Axmed waxaa sii badanayey khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka ee Dowlad Deegaanka Tigreega, iyada oo uu deegaankaasi uu ku doodaya iney dowladda hadda ka arrimisa dalka Itoobiya ay nidaamki Federaalka ee lagu heshiiyey ay god ku sii rideyso.